စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် Jungle သောဝိညာဉ်တော်၏အခြေအနေ |
mechanics: Every timeaplayer playsaminimum of £10 (သို့မဟုတ်အခြားသောငွေကြေးနှင့်ညီမျှ) on across Jungle Spirit: Call of the Wild™ will receive 1* အဆိုပါဆုချီးမြှင့်သရေကျဖို့ entry ကိုလက်မှတ်. * အလားတူကစားသမားဦးရေအများဆုံးရနိုင် 50 တစ်နေ့လျှင်ဆုမဲနှိုက်လက်မှတ်တွေ.
Qualifying Games: တောတွင်းသောဝိညာဉ်တော်: Call of the Wild™.
အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ပွဲတစ်ခါသာဖျော်ဖြေရကြလိမ့်မည်. If the winning Player cannot be contacted successfully notwithstanding Agency’s or the Operator’s attempts the prize award may be declared void at NetEnt’s discretion, အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ကိုအခြားပါဝင်သူမှခွဲဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ရာမှနောက်ဆက်တွဲ.
4ကြိမ်မြောက် – 500ကြိမ်မြောက် £12.75
The cash prizes are worth £8,500 and will be shared amongst 500 ဆုရရှိသူ.
အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များသည့် Player ကိုဖွင့်တာဝန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်.
ကစားသမား / s နဲ့အနိုင်ရတဲ့နှင့်အတူတစ်ခုချင်းစီအော်ပရေတာကစားသမားအကြောင်းကြားနှင့် player အကောင့်ဖို့ငွေသားဆုဆပ်ဖို့ရှိပါတယ်.
Non-EUR ငွေကြေး၏အမှု၌အနိမ့်ဆုံးအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက်, NetEnt မသက်ဆိုင်ငွေကြေး၏ခြေစစ်ပွဲဂိမ်းနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ထိုသို့ BI data တွေကိုဂိုဒေါင်အားဖြင့်ပရိုမို၏ပထမဦးဆုံးနေ့၏အဆုံးမှာသန်းခေါင်မှာပြောင်းလဲဖွင့်.
NetEnt အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောတန်ဖိုးများအတိုင်းငွေသားဆုများပြန်အမ်းလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကူးပြောင်း (လစဉ်ပျှမ်းမျှနှုန်းသုံးပြီး) ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသော invoicing ငွေကြေးကိုသို့.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & Netent အရောင်းမြှင့်များအတွက်အခြေအနေများ